Wasiir Taardhuleed: “DFS iyo NISA Ninka ONLF ee ay Xasbsiga Kala Baxeen ha soo Cesheen” (dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 27, 2017 2:12 b 1
Wasiirka Amniga maamulka Galmudug Cismaan Cilmi Nuur Taardhuleed oo warbaahinta kula hadlay Magaalada Cadaado ayaa ku eedeeyay Ciidamada Nabad Suggida ee ka howlgalla degaanada maamulka Galmudug in ay degaanada Galmudug ka dhoofiyeen nin ka tirsanaan jiray Jabhadda ONLF.
Waxaa uu sheegay in ninkaasi Galmudug ay ku waday Baaritaano, islamarkaana ay ciidamada si qarsoodi ah ugu qaateen Magaalada Muqdisho.
Wasiirka ayaa sheegay in hadii dowladda Dhexe aysan gacanta Galmudug ninkaas ku soo celin in ay Galmudug ka fiirsan doonto Xiriirka kala dhaxeeya DFS. Ciidamada NISA ayuu sidoo kale sheegay in ay dhibaato ka waddaan degaanada maamulka Galmudug.
Ciidamada Nabadsuggida ee NISA ee ka howlgallo Magaalooyinka Gaalkacyo iyo Cadaado ayuu wasiirku sheegay in ay si qarsoodi ah xabsi ugala soo baxeen ninka kaddibna ay Muqdisho u soo dhoofiyeen.
waa iskahadle macnoyare dowlada dhexe halabarto macnaha ay udhisantahay matoobiyuu rabay inuu kagato sidii maamulo hore samaynjireen